सरकारी कर्मचारीलाई पर्यटन काज, घर-ससुराली भएको जिल्ला रोज्न नपाइने ! - Himali Patrika
सरकारी कर्मचारीलाई पर्यटन काज, घर-ससुराली भएको जिल्ला रोज्न नपाइने !
हिमाली पत्रिका २६ जेष्ठ २०७८, 8:36 am
२६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउन पर्यटन काज बिदाको अवधारणा ल्याएको छ ।
‘एउटा मन्त्रीले अवधारणा ल्याउँछन्, कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को आइसक्छन्,’ गुरागाईं भन्छन्, ‘यसले नीतिहरू कार्यान्वयन नै नहुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’ बोर्डका सीईओ डा. रेग्मी भने यो अवधारणा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प नभएको बताए ।